Muqdisho: Ciidamada amaanka oo la wareegay garaash xalay gaari ku qarxay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Ciidamada Nabadsugidda Soomaaliya ayaa maanta la wareegay garaash ku yaalla degmada Wardhiigley ee magaalada Muqdisho, kadib markii gaari qof dhigtay halkaas lagu xiray qarax, islamarkaana isla xalay uu ku qarxay gudaha garaashka.
Ciidamada amniga ayaa soo qabqbaty qaar ka mid ah howlwadeenadii garaashka, kaasoo ku yaalla agagaarka 15 May oo aan wax badan ka fogeyn madaxtooyada Soomaaliya.
Afhayeenka Wasaaradda amniga Qaranka, Maxamed Yuusuf Cismaan oo warbaahinta kula hadlay garaashka lala wareegay ayaa sheegay in ciidamada amniga ay la wareegeen garaashka, waxaana uu intaa ku daray in ciidamadu ay sii wadayaan howlgallada ku aadan sida looga hortagayo Alshabaab iyo kooxaha qaraxyada wada.
Afhayeenka ayaa digniin u diray milkiilayaasha garaashyada inay ka taxadaraan dadka ay shaqaaleysiinayaan, isla markaana ay lala wareegi doono garaashkii falalka nuucaani oo kale ah lagu qabto.
Waa garaashkii ugu horeeyey ee ciidamada amaanku la wareegaan iyadoo lagu eedeeynayo in halkaas halis lagu geliyey nafta muwaadin Soomaaliyeed, kaasoo gaarigiisa qarax lagu xiray, inkastoo la ogeyn halka gaariga lagula xiray walxaha qarxa.
Akhri: 6 qodob oo gudiga amaanka Golaha Wasiiradu kazoo saaray coladda Hiiraan